Ny dikan'ny Ace of Swords Tarot Card | Famakiana Tarot - Ny Dikan'ny Karatra Tarot
Ny dikan'ny Ace of Swords Tarot Card
Ny Ace of Swords Tarot Lisitry ny atiny
Ny Ace of Swords Upright
Nivadika ny Ace of sabatra
Symbolisman'ny nomeraon'ny Ace of Swords
Miverina any amin'ny valin'ny sabatra
Telo, roa, iray - fanesorana!
Ny karatra tarot an'ny Ace of Swords dia toy ny rocket aorian'ny nanombohany. Zava-bita mahavariana, saingy miankina amin'ny fandoavana ny karama na tsia izany zavatra tsara izany na tsia.
Mety mila ekipa mpitsangatsangana amin'ny dia iray hizaha tontolo vaovao. Izy io dia afaka mametraka satelita misy fifandraisana amin'ny orbit, mampifandray olona amina miliara.
Na mety hitondra lohandohany nokleary ary hiteraka fijaliana tsy hita refesina.
Andalana ambany? Ny herin'ny hery an'ny Ace of Swords dia tsy tokony hatao ambanin-javatra ary io no sabatra roa lela.
Ao amin'ny Tarot, Swords dia mifandray amin'ny Element of Air ary ny herin'ny saina. Ny antony madio dia sady tsy tsara no tsy ratsy. Manapaka amin'ny alalàn'ny finoana jamba sy ny finoanoam-poana, dia afaka manadio ny lalana mankany amin'ny tena ara-panahy.
Fa io koa azo ampiasaina hanodikodinana sy hamitahana ny hafa.
Toy izany koa, ny sabatra dia azo ampiasaina hiadiana amin'ny famoretana na famonoana ny hafa amin'ny antony tsy ara-drariny. Toy ny sain'ny olombelona dia fitaovana izy io. Ny fomba fampiasanao azy dia manan-danja mitovy amin'ny hatsaran'ny vy sy ny hamafin'ny sisiny.
Hey, miandry iray minitra? Ahoana no ahafahan'ny zavatra mankaleo toy ny eritreritra mandanjalanja hahatonga anao ho ara-panahy? Raha ny tena izy, misy sampana filozofia iray manontolo natokana ho an'io olana io ihany. Metafisika no iantsoana azy.
taurus lehilahy sy vehivavy taurus eo am-pandriana
Ny sary an'ohatra ao amin'ny karatra Ace of Swords dia manazava tsara ilay hevitra.
ny Gray , tandavan-tendrombohitra tsy misy, ny fetran'ny zavatra fantatrao sy heverinao fa azo atao, dia mipaka amin'ny tapany farany amin'ny karatra Ace of Swords. ny Manga glaciers dia nofinofy sy fanantenana izay nihena tao anatin'ny toetr'andro mafy orina amin'ny zava-misy ara-batana.
Angamba ianao nametra-pialana amin'ny fieritreretana fa izao no misy eo amin'ny fiainana. Tamin'izany no nanoloran'ny tanana masina anao làlana mankamin'ny fahalalana ambony. Amin'ny faran'ny làlana ity dia ny fandriam-pahalemana, aseho amin'ny ravina palma ary ny fahombiazana, ny sampana oliva. Ny satro-boninahitra amin'ny Ace of Swords dia maneho fahatakarana ara-panahy. Tery sy tery ny lalana, io no faran'ny sabatra.
Miorina Ace of Swords Tarot Taratra
Amin'ny famakiana, ny karatra Ace of Swords dia mampiseho fahombiazana lehibe na fahitana. Ny Ace of Swords dia milaza aminao ihany koa fa ny fanapahan-kevitra lehibe raisinao dia mety hisy vokany eo amin'ny fiainana.
Tadidio fa tsy kilalao ny sabatra.
Ny sabatra tsy voadio dia hanova haingana ny feon'ny resaka rehetra - toy ny ao amin'ny Shakespeare's Romeo sy Juliet, izay mahafinaritra sy lalao daholo mandra-pahatongan'ny olona iray misintona ny lelany.
Ny fanoloranao tena amin'ny fiainana ara-panahy dia tena toy ny misintona sabatra. Raha vantany vao nanapa-kevitra ny handray ny dingana voalohany amin'ny dia ianao, dia tsy misy fiverenana. Tokony ho hitanao hatramin'ny farany izany.
Ny sabatra dia mifandray amin'ny saina sy ny saina: izany no fomba fahalalanao sy fahatakarana an'izao tontolo izao. Ny fijery voalohany ao ambadiky ny ridao dia manova ny zava-drehetra. Tsy afaka mahita an'izao tontolo izao intsony ianao tahaka ny taloha - na inona na inona tianao atao.
aiza izao ny fanadihadiana vaovao amin'ny faravodilanitra ankehitriny
Midika izany fa ny Ace of Swords dia karatra herim-po ihany koa.
Ny Ace of Swords dia manondro ihany koa ireo fotoana manan-danja miandry anao, angamba amin'ny endrika fahitana tampoka na aingam-panahy.
Indraindray, ny karatra tarot an'ny Ace of Swords dia mampitandrina ny amin'ny toe-javatra mety hisian'ny fifandonana. Saingy amin'izany, hanana tombony ianao. Raha vonona ny handray andraikitra ianao ary hanao zavatra haingana, dia hosatrohina amin'ny fahombiazana ny ezaka ataonao.
Tokony hotadidinao foana fa ny maharesy tsara dia manan-danja toy ny resy tsara. Raha vantany vao vita ny tolona dia tsy ilaina ny fikosehana sira amin'ny ratran'ny mpanohitra anao. Satria na inona na inona mitranga aorian'izany dia hisarika ny saina farafaharatsiny farafaharatsiny toy ny totohondry nandondom-bokatrao natolotrao. Fahendrena ny maka antoka fa tsara io fiheverana io.
Raha vao niaina fihemorana ianao, dia ho hitanao tsy ho ela ny firavaka volafotsy amin'ny toe-javatra misy anao. Raha mbola velona ianao dia tsy resy marina mihitsy. Ireo zavatra mety very anao dia mety nitazona anao, mitazona anao tsy hiaina mifanaraka amin'ny tena tanjonao.
Ankehitriny rehefa tsy mitazona anao intsony ireo fatorana ireo dia afaka manaparitaka elatra ianao ary manidina!
Ace of Swords Niverina tamin'ny dikany Tarot
Rehefa avadika ny tarotan'ny Ace of Sword dia midina mafy izy io. Tsy ho diso ny marika misy azy io. Raha mahavoa anao io fa tsy aminao dia vaovao tsara izany.
Amin'ny tranga tsara indrindra dia nifarana haingana ny ady mafy. Ny tongotrao dia namboly mafy teo an-damosin'ny mpanohitra anao, ankehitriny dia maka sary ireo sary amboara ianao.
Saingy ny karatra tarot an'ny Ace of Swords dia mampitandrina ihany koa fa ny sabatra misy sisiny roa, ary samy maranitra ny hareza. Mitandrema tsara amin'ny fampiasanao azy. Afaka manapaka ny tenanao ianao.
Ohatra, mandritra ny fifanakalozan-kevitra na fifamaliana mahery setra, dia mety ho tezitra be ianao amin'ny fanaporofoanaana fa marina ianao ary diso ilay iray hafa. Ny mpijery dia mety hiafara amin'ny fialan-tsasatra amin'ny mpanohitra anao, satria fotsiny ianao manao tahaka ny hadalana.
Ny sabatra dia mifampiresaka amin'ny fahazoana misaina. Rehefa avadika dia manome sosokevitra ny Ace fa mety hafangaro amin'ny olana manokana ianao. Manangona fampahalalana bebe kokoa ary makà fotoana kely hisaintsainana alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra lehibe.
mifanaraka ve ny pisces sy scorpios
Zava-dehibe indrindra izany, raha nahazo fifandraisana ara-panahy ianao. Malaza ho cryptic malaza izy ireo, ary tsy tokony horaisinao ara-bakiteny izany - indrindra raha mazava na manelingelina ny sary.
Ny karatra Fahafatesan'ny Major Arcana, ohatra, dia mety ho endrika mampatahotra. Manontania tena hoe impiry ianao no nahita azy niseho tamin'ny famakiana. Okay. Impiry ianao no tena maty nanomboka teo?
Toy ny Tarot, ny sarin'ny fahitanao dia tandindona. Raha te hahalala ny tena dikan'izy ireo dia mila mianatra mandika azy ireo tsara ianao. Raha tsy izany dia ho lasa lasibatry ny eritreritrao ianao.
Rehefa avadika ny karatra tarot an'ny Ace of Swords dia lasa sambo ny satro-boninahitra. Ampidinina ao anatiny ny sabatra ka mahatonga ny oliva sy ny rofia hiakatra ambony. Amin'ity fomba fijery ity, ny Ace of Swords dia lasa karatry ny harena tsy ampoizina. Ny Ace of Swords dia afaka milaza ihany koa fa mety ho eny an-dalana ny zaza iray.
Taratasy metaphysical an'ny Ace of Swords Tarot:
singa : Rivotra
Famantarana Zodiac : Aquarius , Gemini , Libra
Kristaly fanasitranana : Clear Quartz
Ny karatra Ace of Swords & Tarot Numerology
Aces mifanaraka amin'ny Isa 1 . Kabbalistically, ity isa ity dia maneho ny filaharan'Andriamanitra.
Amin'ny numerologie nentim-paharazana dia ampifandraisina amin'ny hazavan'ny masoandro sy ny famirapiratan'ny masoandro izy io. Eto, ny angovo mitambatra dia mampita ny votoatin'ny rivotra sy ny saina maranitra omena ny sabatra.
inona no dikan'ny 777 amin'ny isa
manao pisces sy capricorn manao match tsara ve
vehivavy sagittarius sy lehilahy aquarius manao firaisana
vehivavy sy vehivavy virtoaly taurus
lehilahy scorpio sy vehivavy libra amin'ny fitiavana